Enwere na-adaba ka anu ulo? Atụmatụ maka ọdịmma anụmanụ
Parrots dị ka anu ulo
Ụdị oke àgwà nke anụ ọhịa na-adị na ezigbo ụlọ
Nri maka parrots
Ngwurugwu bụ anụmanụ ndị na-ahụ n'anya
Ịdọ aka ná ntị banyere ịzụ aka
A na-ewere paro dị ka otu n'ime ụdị nnụnụ kachasị mma n'ụwa. Ruo umu 350 puru iche, tinyere 850 ala. Enwere ike ịmasị nnụnụ dịgasị iche iche n'ụwa nile, ya mere ndị a na-aghọwanye ndị a ma ama dị ka anụ ụlọ n'ihi ịma mma ha.
Ụlọ - Nlekọta - Ọrụ - Nri nke parrots
Nnụnụ ndị ahụ bụ Australia, America ma ọ bụ New Guinea, ma a pụrụ idebe ha gburugburu ụwa ma too ruo afọ 100. Ma, ọ bụ ihe nkwekorita ka ọ bụ nkịta, nwamba ma ọ bụ ọka pigry?
Enwere na-adaba ka anu ulo?
Maka nnụnụ niile dị iche iche, ịchebe onu nwere ike ịbụ ụdị-ụdị kwesịrị ekwesị. Ka o sina dị, nke a bụ ihe ize ndụ maka ọtụtụ nnụnụ. Ya mere, ọ dị mkpa ịṅa ntị n'ọdụ ụgbọ mmiri buru ibu, ebe dị ntakịrị karịa mita 4 ma ogologo 2 n'ogologo, ma dị elu, nwere ike ịbụ anụ ọjọọ anụ ọhịa na ikekwe bụrụ ebe ụra.
Nke bụ eziokwu bụ na àgwà nnụnụ nwere ike ịbụ eziokwu na ụdị nnụnụ ahụ mgbe nnụnụ nwere nnukwu ụlọ dị n'èzí, gụnyere nnukwu ụlọ na-ekpo ọkụ.
N'adịghị ka nkịta ma ọ bụ nwamba, nnụnụ ndị a ga-akpachara anya maka mma ọkụ dị n'ime ụlọ ahụ. Ọbụna n'oge oyi, nke a aghaghị ịdịkarịa ala 60 percent.
Onye nwere ọtụtụ osisi n'ime ụlọ ahụ nwere ike inye aka mee ka ọnụ mmiri dịkwuo elu. Tụkwasị na nke a, a pụrụ ịkụnye parrots ọtụtụ ugboro n'ụbọchị na obere mmiri. Ọ bụrụ na iru mmiri dị oke ala, ndị parrots nwere ike ịrịa ọrịa ahụ ọkụ ma mesịa nwụọ.
Ime n'ime aviaries dị oke mkpa. Ejiri alaka osisi, dịka osisi osisi, willows ma ọ bụ osisi lime, dochie plastic, ma ọ bụ bekee wood perches. Okwute ndị ahụ dị nro na ụrọ anaghị adị ọbụna. N'ihi ya, a pụrụ igbochi nsị nke ụkwụ.
Ọzọkwa, ájá dị na ala ndị dị n'elu ala ekwesịghị ịbụ ájá, kama, ọ bụ ihe kpatara akwụkwọ akụkọ, nke a ga-agbanwe kwa ụbọchị. Ejikwa ahịhịa beechwood kwesịrị ekwesị dịka ihe mkpuchi.
Iji zere nsị dị arọ na nro, nke nwere ike ịmalite site na mgbe niile na ihe niile, ndị na-agba ụgbọ mmiri ekwesịghị inwe mkpuchi ma ọ bụ agba. Akara ndị e ji igwe anaghị agbacha agbacha ka mma.
Akwukwo nri ndi ozo maka ndi ozo di nma maka ihe oriri. Otú ọ dị, a ga-akwụ ụgwọ nlebara anya ebe a iji nyekwu nri. A na-enye mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri kwa ụbọchị na parrots. Fọrọ nke nta ka ụdị niile dị mma na-ewu ewu.
Site na okike, pasent abụghị ndị na-eri ọka dị ọcha kama ọ dị mkpa ịnweta mkpụrụ osisi mgbe nile. A ghaghị ibelata ụkọ nke ebu spores na nri ntanetị. Maka sieve na mmiri dị mma. Enwere ike ichota nri a, ma aghaghi ime ka ọ dịkarịa ala ugboro abụọ n'ụbọchị. Maka mmiri zuru ezu ka mmiri kwesịrị ịnweta. Mgbanye mmiri ga-enwe oke sodium ma merie akụrụ akpụ.
Ịgba ọsọ efu kwa ụbọchị kwesịrị ịbụ akụkụ nke usoro ụbọchị iji mee ka ahụ dị mma. Nnụnụ ndị na-enweghị ike ịkụ efe ga-arịa ọrịa ọsọ ọsọ, nweta nsị ma ọ bụ ọrịa nsị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta ugbo, mana ị maghị na anụ ndị ahụ bụ anụ dị ezigbo mma, kwesịrị ịtụle azụ azụ. Ịmanye otu akpa ka o guzoro naanị ya nwere ike igbu ya. Azụ nwere ike ịmalite ịda mbà n'obi na-ajụ ịhapụ nri ma mesịa ghọọ onye owu na-ama ma nwụọ.
Otú ọ dị, ọ bụghị ụdị dị iche iche nke parrots ka a ga-edebe, mana ọ ga-abụrịrị ụdị otu a ga-ahọrọ. N'agbanyeghi ole ụmụ mmadụ ji arụ ọrụ, ha abụghị ndị na-anọchite anya ya. E nwere ọtụtụ ọrụ maka parrots, n'ihi na ha so n'ime anụmanụ ndị nwere ọgụgụ isi.
Ịmụ aghụghọ na-achọ isi. Na akwụkwọ ma ọ bụ na Ịntanetị ị ga-achọta ọtụtụ ndụmọdụ na usoro gbasara ohere ọrụ nke parrots.
N'ụzọ dị mwute, ụdị a dị oke mma maka idebe nnụnụ ụlọ. N'ezie, ndị nwe obodo chọrọ ka ụmụ anụmanụ na-ahụ ọkụ ma na-enwe ọmịiko dị ka o kwere mee. Ka o sina dị, ọ nwere ike ịmepụta nsogbu omume dị ịrịba ama na ọbụlagodi mmejọ nwere ike. Ndị a nwere ike igosi, dịka ọmụmaatụ, na nbibi onwe onye, ​​ma ọ bụrụ na nke a na-efopụ afụ ọnụ na n'ụzọ nkịtị.
Ụfọdụ na-eji aka na-eme ka mmadụ nwee ike ịghọ ndị na-eme ihe ike n'ebe ụmụ mmadụ nọ. E kwesịrị iji nlezianya mee ihe karịsịa na amazons, cockatoos na macaws.
Ndị na-echegbu onwe ha maka ọdịmma nke okooko ahụ kwesịrị ime onwe ha na ọkwá dị mma ma zụta onye maarala ndụ dị iche iche ma bụrụ onye nne na nna na-azụ. Ọbụna uzo dị otú ahụ nwere ike ịba ụba na ndidi.
Enwere mpekere maka ụmụaka?
Maka umuaka, ugbo adighi nma. Ọbụna uzo nke kachasị njọ nwere ike ịkpata mmerụ na ọdụ ha. Tụkwasị na nke a, umuntakiri nke na-ebe ákwá ma na-eme ka ndụ na-agwụ ike kwa ụbọchị nwere ike ime ka ụmụ anụmanụ na-adịgide adịgide. Tụkwasị na nke ahụ, ụdị okike n'ezie-àgwà kwesịrị ekwesị bụ ihe dị oké ọnụ ahịa, a ghaghịkwa ịtụle ya, karịsịa dị ka ndị na-emekarị mkpọtụ pụrụ ịka nká na ọ ga-ekwe omume na nnụnụ ndị a na-adịgide ndụ n'onwe ha. E kwesiri ka ekwenyekwu ya.
Malvorlage Papageien | Tiere
Spiders dị ka anu ulo
Snakes dị ka anu ulo
Rats dị ka anu ulo
Cats dị ka anu ulo
Nti anụ dị ka anu ulo
Azu dị ka anu ulo
Ịmụta Pony dị ka Pita & Ịnyịnya | Anu ulo
Anu ulo - Gini mere anu ulo di oke mkpa?
Golden hamster dị ka Pita
Ụlọ ịsa m na m - karịa nlekọta ahụ